Posted on April 24, 2014 November 20, 2020 by csr 1687
Kurarama Nokushungurudzika Kunogona Kuva Nenguva Yakareba Mhedzisiro Pahutano Hwako
Kushungurudzika kunokanganisa zvinopfuura makumi matatu neshanu miriyoni vakuru gore negore.
Pakati peizvi, mamirioni 6.5 ari pamusoro pemakore makumi matanhatu nemashanu.
Mumakore anotevera emunhu upenyu, shanduko dzinoitika dzinogona kukonzera kushushikana.
Izvi zvinosanganisira zvirwere zvekurapwa, kufa kwevakaroora kana vamwe vadikani uye mudyandigere. Kushungurudzika kunodzivirira vanhu vakuru kubva mukunakidzwa nehupenyu hwavo sezvavakaita vachiri vadiki. Migumisiro yekushungurudzika, zvisinei, inowedzera kure kupfuura kuchinja kwemanzwiro. Varwere vanova vashoma simba, vanoona shanduko munzira dzekurara, shanduko mukuda kwavo uye kudzikira muhutano hwepanyama. Zvisinei, izvi hazviwanzo zvisingadzivisiki kana zvasvika pakukwegura. Pane matanho uye nzira idzo vakuru vakuru vanogona kutarisa kwadzo kukurira iyozviratidzo zvekuora mwoyo.
Zvinokonzera Kushungurudzika muVakwegura Vakuru
Sezvo vanhu vanokwegura, hutano hwavo kazhinji rinotanga kudzikira. Ivo vanogona kusangana zvakanyanya kana kusingaperi kurwadziwa, kuva remara kana kuvhiiwa kana zvirwere zvinokuvadza miviri yavo. Zviratidzo izvi zvinogona kukonzera kuti munhu aore moyo uye anzwe kunge asingabatsiri.
Vakwegura vazhinji vanogara vega, kazhinji nekuda kwekufa kwemurume / mukadzi, zvadzikira kufamba uye handisisina kodzero dzekutyaira. Izvi zvinhu zvinogona kukonzera manzwiro okusurukirwa uye kusurukirwa.
Yakawedzera Sense yekusagadzikana
Kana vanhu vasvika pazera rekurega basa kana vakanetswa mumuviri, vanogona kunzwa pfungwa yekusava nechinangwa.
kufunganya pamusoro penyaya dzehutano kana matambudziko emari zvinogona kukonzera kuti munhu aore mwoyo. Uyezve, sezvo vanhu vanokwegura, vanowedzera kutya rufu.
Kana vanhu vakarasikirwa nevavakaroorana navo, shamwari kana mhuka dzinovarairwa kusvika parufu, vanogona kusuwa; izvi zvinogona kukonzera kushushikana. Muchiitiko ichi, vakafirwa vanogona kufunga zvekugara nenhengo dzemhuri kana shamwari.
[btn link = "http://www.psychguides.com/guides/living-with-depression-in-older-adults/" color = "grey" size = "size-l" target = "_ blank"] Verenga Pakutanga Chinyorwa [/ btn]